CISM परीक्षा बन्ने – नाश भएको InfoSec परीक्षा
CISM परीक्षा बन्ने
यो CISM वा प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबन्धक प्रमाणीकरण जानकारी सुरक्षा प्रबन्धकहरू लागि सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रमाणहरू एक छ र अधिक द्वारा कमाएका गरिएको छ 27,000 विश्वभरिका पेशेवर.
यस्तो प्रमाणीकरण पत्रिका द्वारा उच्चतम भुक्तानी प्रमाणीकरण रूपमा सूचीकरण रूपमा recognitions संग, र बेलायत मा प्रमाणपत्र लागि सबैभन्दा देख्यो रूपमा सूचीबद्ध भइरहेको, अष्ट्रेलिया र U.S., एक CISM एक जानकारी सुरक्षा व्यवस्थापनमा आफ्नो क्यारियर विस्तार लागि-हुनुपर्छ छ. तपाईं परीक्षा लिन योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, निम्न जानकारी आफ्नो बाटो मा तपाईंलाई मदत गर्नेछ.
CISM प्रमाणीकरण आवश्यकताहरु
CISM प्रमाणीकरण आवश्यकताहरु जानकारी सुरक्षा अनुभव पाँच वर्ष को एक न्यूनतम समावेश, एक जानकारी सुरक्षा प्रबन्धक रूपमा अनुभव दुई वर्ष को एक न्यूनतम, र, अवश्य यो CISM परीक्षा उत्तीर्ण. तपाईं एक CISA संग सामान्य काम अनुभव दुई वर्ष विकल्प सक्छ, CISSP प्रमाणीकरण, वा जानकारी सुरक्षा वा अन्य सम्बन्धित क्षेत्र मा एक पोस्ट-स्नातक डिग्री.
तपाईं पनि सहमत र ISACA गरेको व्यावसायिक नीतिशास्त्र को कोड र CISM सतत शिक्षा नीति अनुरूप हुनेछ. तपाईं आफ्नो न्यूनतम पाँच-वर्ष कार्य अनुभव को पूरा पहिले परीक्षण लिन रोज्न सक्नुहुन्छ, तपाईं कार्य अनुभव पूरा नभएसम्म तर तपाईं प्रमाणीकरण हासिल गर्न सक्दैन.
CISM प्रमाणीकरण लागत
CISM प्रमाणीकरण लागत तपाईं ISACA को एक सदस्य हो वा छैन मा निर्भर भिन्न र तपाईं दर्ता गर्न इरादा कसरी. एक प्रमाणीकरण आवेदन शुल्क अलावा $50, तपाईं बीच तिर्न आशा गर्न सक्छौं $625 र $750 अनलाइन दर्ता शुल्क वा परीक्षा लागि एक फ्याक्स वा postage दर्ता शुल्क या त को लागि. तपाईं यी मूल्यहरु को कुनै मा ठूलो छूट लागि ISACA समावेस हुन सक्छन्. त्यहाँ छ $50 आफ्नो दर्ता परीक्षा र एक परिवर्तनहरू बनाउन को लागि शुल्क $100 एक फिर्ती प्रक्रिया पूरा लागि शुल्क.
सूचना सुरक्षा पाठ्यक्रम
तपाईं CISM परीक्षा लागि आफैलाई तयार लिन रोज्न सक्नुहुन्छ सूचना सुरक्षा पाठ्यक्रम को एक नम्बर छन्, र केही पनि आफ्नो CISM कार्य अनुभव तिर गणना. CISA र CISSP प्रमाणपत्र कार्य अनुभव को दुई वर्ष को एक अधिकतम लागि बाहिर swapped सकिन्छ.
सामान्य जानकारी सुरक्षा प्रमाणपत्र वा मोडेल पाठ्यक्रम उपयोग संस्था मा एक जानकारी सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रम को एक पूरा काम अनुभव एक वर्ष ठाँउ प्रयोग गर्न सकिन्छ. तपाईं पनि आफ्नो पार स्कोर सुधार गर्न आफ्नो ज्ञान अझ गर्न विश्वविद्यालय को एक किसिम मा जानकारी सुरक्षा व्यवस्थापन अध्ययन गर्न सक्छन्.
CISM अनलाइन प्रशिक्षण
यस ISACA समीक्षा र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को एक नम्बर प्रदान गर्दछ जबकि, तपाईं पनि आफ्नो कौशल मा माथि ब्रश गर्न अनलाइन वैकल्पिक प्रशिक्षण खोजी गर्न सक्छन्, परीक्षा बारेमा अधिक सिक्न, र राम्रो परीक्षण पारित गर्न आफैलाई तयार. तपाईं ISACA द्वारा प्रदान अनलाइन पाठ्यक्रमहरू आफैलाई तयार वा पार स्कोर रही आफ्नो संभावना सुधार र अध्ययन आयोजन संग मदत गर्न डिजाइन गैर-ISACA सामाग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
CISM अभ्यास प्रश्न
तपाईं CISM प्रमाणीकरणका लागि दर्ता भएपछि, तपाईं प्रशिक्षण सामाग्री को एक नम्बर उपयोग गर्न सक्छन् र अध्ययन ISACA देखि सीधा गाइड तर कुनै पनि स्वतन्त्र छौं. यी आधिकारिक प्रशिक्षण माल प्रमाणीकरणका लागि आफैलाई तयार लागि आदर्श हो, तर अन्य विकल्प को एक नम्बर छन्.
यो ISACA पनि जवाफ र स्पष्टीकरण संग समीक्षा प्रश्नहरू संग पुस्तिका र नमूना प्रश्न प्रदान. यी CISM पुस्तकहरू वार्षिक अद्यावधिक तर सामान्यतया समावेश छन् 815 एक पूर्ण नमूना परीक्षण संग अभ्यास डोमेन क्रमबद्ध धेरै विकल्प प्रश्नहरू 200 अनियमित प्रश्नहरू. समीक्षा पुस्तिका तपाईं प्रश्नहरू बरु परीक्षा पार गर्न आवश्यक पनि जानकारी उपलब्ध छन्. अतिरिक्त सम्मपूरक सामाग्री पनि प्रत्येक पुस्तकको लागि उपलब्ध छ.
Review courses provided by the ISACA are held around the globe and vary in length, अध्ययन सामाग्री र लागत. Intensively परीक्षा लागि तपाईं तयार गर्न इरादा तीन दिन समीक्षा पाठ्यक्रम बस परीक्षा को एक पहिले उपलब्ध छन्, तर तपाईं पनि आफ्नो बजेट र आवश्यकता मा निर्भर अधिक व्यापक समीक्षा या छोटो भएकाहरूले सक्छ. यस ISASCA देखि सबैभन्दा समीक्षा कोर्स एक न्यूनतम लागत $250 गैर-सदस्य लागि, र को सामान्यतया एक अधिकतम $1,500.
यो ISACA पनि एक मुक्त आत्म मूल्यांकन परीक्षा प्रदान 50 प्रश्न, तपाईं वास्तविक परीक्षा लागि आफ्नो तैयारी परीक्षण गर्न अनुमति.
यो CISM परीक्षा र CISM परीक्षा मिति
तपाईं ISACA वेबसाइटमा CISM परीक्षा लागि दर्ता गर्न सक्छन्, तपाईं आफ्नो दर्ता फारम र कसरी नजिक आधारित विभिन्न शुल्क तिर्न कहाँ यो परीक्षा छ. परीक्षा दुई तीन सप्ताह पूर्व, तपाईं देखाउन जब तपाईं प्रवेश टिकट लिस्टिंग प्राप्त, तपाईं ल्याउन के, र दिनको लागि एक तालिका. तपाईं एक फोटो आईडी र आफ्नो प्रवेश टिकट ल्याउन. यो कम्तिमा पनि देखाउने महत्त्वपूर्ण छ 30 मिनेट परीक्षा सुरु हुनुभन्दा, यस समयमा नजिक दरवाजे रूपमा.
परीक्षा मिति लागि रूपमा, यस CISM परीक्षा जुन र डिसेम्बर प्रति वर्ष दुई पटक उपलब्ध छ. परीक्षण नै चार घन्टा लाग्छ र सामेल 200 कुल प्रश्नहरू, तपाईं प्रश्न प्रति बस भन्दा एक मिनेट दिएर. तपाईं प्राप्त4प्रश्न प्रति अंक र एक न्यूनतम पार स्कोर आवश्यकता 450, या लगभग 113 सही प्रश्नहरू. एक सिद्ध स्कोर 800 तपाईं सही सबै जवाफ आवश्यकता 200 प्रश्न. तपाईं पाँच सप्ताह परीक्षा खत्म पछि मेल मा आफ्नो स्कोर प्राप्त हुनेछ. तपाईं पार र आफ्नो स्कोर गरेका एकचोटि, तपाईं आफ्नो प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न आफ्नो CISM आवेदन गर्न सक्छन्.
तपाईं आफ्नो CISM परीक्षा परिणाम छन् एकचोटि, तपाईं ISACA वेबसाइट देखि आवेदन डाउनलोड र मुद्रण द्वारा CISM प्रमाणीकरणका लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि काम को अनुभव को पाँच वर्ष को प्रमाण पेस गर्न, आफ्नो हाकिमहरूले देखि साइन इन प्रमाणिकरण संग. तपाईंलाई यो मेल एकचोटि, ISACA तपाईंको आवेदन समीक्षा र, तपाईं योग्य प्रदान, आफ्नो प्रमाणीकरण मुद्दों. तपाईं को आवेदन शुल्क तिर्न छन् $50 यो मेलिंग अघि.
केवल एक साथ 50-60% पहिलो पटक पास दर , यो अध्ययन र तपाईं परीक्षा लिन अघि CISM लागि प्रश्नहरू सिक्न जरुरी छ. संगठित अध्ययन परीक्षा उत्तीर्ण लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर परीक्षण प्रश्नहरू संग आफ्नो शिक्षा कौशल र वर्तमान familiarity मा निर्भर, जो तपाईं ISACA मूल्यांकन परीक्षण गरेर मूल्याङकन गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईं तरिका को एक किसिम मा अध्ययन भेट्नुपर्छ सक्छ.
तपाईं पार स्कोर नजिक वा नजिकै हुनुहुन्छ भने, यस ISACA गरेको प्रदान पुस्तकहरू प्रयोग सिक्न उपयोगी हुन सक्छ. तपाईं पनि उपलब्ध समीक्षा कोर्स एक लिन रोज्न सक्नुहुन्छ. तपाईं परीक्षण सामाग्री संग संघर्ष गर्दै छन् भने, के तपाईं सामाग्री संग परिचित र पारित गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न तेस्रो पक्ष तैयारी पाठ्यक्रम रोज्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं देखाउन अघि CISM अध्ययन गर्न आवश्यकता छैन, तर यो तपाईं पारित सुनिश्चित गर्न त्यसो महत्त्वपूर्ण छ. एक कम पहिलो पटक पार प्रतिशत संग, अध्ययन, परीक्षण को मानसिक दबाव लागि आफैलाई तयारी, र तपाईं धेरै अभ्यास परीक्षा मा राम्रो काम गरेको निश्चित बनाउन पहिलो तपाईं सबै भन्दा राम्रो स्कोर संग पारित गर्न अनुमति दिन्छ.
सर्वश्रेष्ठ CISM समीक्षा कोर्स छूट & तुलना
CISM अनलाइन पाठ्यक्रम
समग्र दर्जा ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
WEBSITE CISM SuperReview Simplilearn CISM CISM ExamPractice CISM क्यारियर एकेडेमी
मूल्य $665 $499
कुपन प्राप्त $599 $449
कुपन प्राप्त $599 $499
छुट प्राप्त $495
अभ्यास प्रश्न 600 88 N / N /
अभ्यास परीक्षा 52 65 क्विज5क्विज4क्विज
भिडियो पाठ 590 Narrated स्क्रीन 16 घण्टा 14 घण्टा 15 भिडियो व्याख्यान को घन्टा
CPE क्रेडिट 40 समाप्तिमा CPEs 16 CPE गरेको प्रस्ताव कुनै पनि कुनै पनि
स्वरूप अनलाइन, स्व-paced अनलाइन, आत्म-paced वा प्रत्यक्ष
अनलाइन, स्व-paced अनलाइन, स्व-paced
ग्यारेन्टी6महिना विस्तार
तपाईं पार नगर्नुहोस् भने7दिन मुद्रा-फिर्ता गारंटी कुनै पनि7दिन मुद्रा-फिर्ता गारंटी
अनलाइन पहुंच 180 दिन 180 दिन 180 दिन 30 दिन
सुरू अब START अब START अब START अब START
April 5, 2018 /0 टिप्पणीहरू/द्वारा जेम्स किनारा
http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-2.png 500 500 जेम्स किनारा http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png जेम्स किनारा2018-04-05 17:08:002018-01-10 22:00:00CISM प्रमाणीकरण
सम्पर्क & जानकारी
नीतिहरू र प्रकटीकरण
CISA पाठ्यक्रम & प्रमाणीकरण
सर्वश्रेष्ठ CISA समीक्षा पाठ्यक्रम
सर्वश्रेष्ठ CISM अध्ययन सामाग्री & समीक्षा पाठ्यक्रम
प्रतिलिपि अधिकार © 2018 CrushTheInfoSecExams.com. सबै अधिकार सुरक्षित.